Antsakabary : novatsina ireo mponina may trano | NewsMada
Antsakabary : novatsina ireo mponina may trano
Nidina tany Antsakabary ny minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy, nanolotra tamin’ny fomba ofisialy ireo fanampiana ho an’ny mponina niharam-boina nandritra ny nahafatesana polisy roa sy nahamay trano maro tany an-toerana.
Tsiahivina fa nisy ny fitsaram-bahoaka nataon’ireo mponina ka nahafaty polisy 2 tany an-toerana tamin’ny 18 febroary teo tao amin’ny tanànan’Ambalamanga. Nidina nampandry tany tany ireo polisy 40 lahy taorian’izay ka nilazan’ny mponina fa nandoro ny tanàna manontolo ka nampahantra ny mponina tany.
Nahazo vary 7 taonina ny vahoaka tany izay natolotry ny minisitry ny mponina ny 25 aogositra teo. Tonga amin’ny ilana azy koa ny fitaovam-pianarana ho an’ny ankizy 752 any amin’ny EPP. Tsy hadino ny milina fanjairana ho an’ny fikambanam-behivavy.
Nisy ihany koa ny asa tana-maro izay nentina nanarenana ireo fianakaviana voa mafy any an-toerana. Manodidina ny 800 ireo olona hiasa amin’ny fanadiovana ny tanàna mandritra ny 5 andro misesy.
Mitentina 5.000 Ar isan’olona ny vola omena azy ireo.
Nahaliana ny mponina koa ny tohin’ny fanadihadiana mikasika ny raharaha niseho tany an-toerana. Fantatra tamin’izany fa nampidirina am-ponja vonjimaika ao Antsohihy ny olona roa ahina ho nahafaty ilay polisy roa.